မာနထောင်လွှားသော ယုံကြည်သူတစ်ဦး၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
ဟီနနပြည်နယ်မှ ဇန်ရီတို ရေးသားသည်
“အို ဘုရားသခင်။ ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်းက အလွန် စစ်မှန်ပြီး ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းတို့ဖြင့် ပြည့်ပေ။ လူသားမျိုးနွယ်၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း အမှန်တရားအကြောင်း သင်၏ ထုတ်ဖော်ပြခြင်းများက ကျွန်ုပ်ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖော်ထုတ်ခံရစေသည်။ ကိုယ်တော်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ရရှိဖို့ရန်သာ နှစ်ကာလများစွာ ကျွန်ုပ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသုံးခံခဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလုပ်များစေခဲ့ပုံတို့ကို ကျွန်ုပ် တွေးမိခဲ့သည်။ လူအုပ်မှ ထင်ပေါ်နိုင်ဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းရင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ရင်း ရှင်ပေါလုကို ကျွန်ုပ် အတုခိုးခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်များက ကျွန်ုပ် မည်မျှ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး စက်ဆုပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ကို မြင်စေခဲ့သည်။ အရှက်ရလျက်နှင့် အနေခက်လျက်ဖြင့် မြေကြီးပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်လဲကျ၊ ကိုယ်တော်၏ မျက်နှာတော်ကို ကျွန်ုပ် မျှော်ကြည့်ရန် မထိုက်လှပြီ။ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျွန်ုပ် လျှောက်ခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းကို ကျွန်ုပ် ပြန်လှည့်ကြည့်မိခဲ့သည်။ ယခုအထိ ကျွန်ုပ်ကို လမ်းကြောင်း၏ခြေလှမ်းတိုင်းတွင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြရင်း၊ ကျွန်ုပ်ကို စောင့်ရှောက်ကာ ကွယ်ကာခဲ့သည်မှာ ကိုယ်တော် ဖြစ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်ရန် ကိုယ်တော် မည်မျှ ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ် မြင်ရသည်၊ ယင်းမှာ ကိုယ်တော်၏ ချစ်မေတ္တာသက်သက် ဖြစ်ပေ။ အို ဘုရားသခင်။ ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့ကြုံခြင်းအားဖြင့်၊ ကိုယ်တော်၏ စစ်မှန်သော ချစ်မေတ္တာကို ကျွန်ုပ် မြည်းစမ်းရပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိဖို့နှင့် စစ်မှန်စွာ နောင်တရဖို့ အခွင့်ပေးသည်မှာ ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်း ဖြစ်ပေ။ ကျွန်ုပ် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးလွန်း၍ ကျွန်ုပ်ကို တရားစီရင်ပြီး သန့်စင်စေရန် ကိုယ်တော့်ကို ကျွန်ုပ် အကယ်ပင် လိုအပ်ပေ။ ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်း မရှိပါဘဲ၊ အမှောင်ထဲတွင် ကျွန်ုပ် စမ်းတဝါးဝါးသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်ကို အသက်၏ အလင်းလမ်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်မှာ ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော့်ကို ချစ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော့်အတွက် အသက်ရှင်ခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်အရှိဆုံးသော ရှာဖွေလိုက်စားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် ခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ် လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်မိသည်။ ကိုယ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းတို့သည် ကိုယ်တော်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှင့် စစ်မှန်သော မေတ္တာဖြစ်ပေ။ သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ် နားလည်ပြီး ကိုယ်တော့်အတွက် ပိုမိုသန့်စင်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရရှိမည်။ ကျွန်ုပ် မည်မျှ ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားရပါစေ၊ ကျွန်ုပ် လိုလားလျက် ရှိပါ၏။” (သိုးသငယ်နောက်လိုက်ပြီး သီချင်းအသစ်များကိုသီဆိုပါ စာအုပ်ထဲရှိ “ဘုရားသခင်သည် များပြားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကျွန်ုပ်အား ပေးပြီ”). ဤဓမ္မသီချင်းကို ကျွန်တော်သီဆိုသည့်အချိန်တိုင်း ဤနှစ်များအားလုံးတစ်လျှောက် ကျွန်တော့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကို စဉ်းစားမိပြီး ကိုယ်တော့်အပေါ်တွင် ကျေးဇူးတင်ရှိမှုများဖြင့် ကျွန်တော် ပြည့်နေပါတော့သည်။ ကျွန်တော့်ကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်မှာ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းက မာနထောင်လွှားပြီး ရည်မှန်းချက်ကြီးသော၊ ပုန်ကန်တတ်သောသားဖြစ်သည့် ကျွန်တော့်ကို လူသားနှင့်အနည်းငယ်ပိုတူလာစေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ရိုးသားစွာဖြင့် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ကျေးလက်ဒေသတွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့် မိသားစုသည် ဆင်းရဲပြီး၊ မိဘများက် ရိုးသားသောကြောင့် သူတို့ မကြာခဏ လိမ်လည်မှုကို ခံကြရပါသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွန်တော့်ကို လူတွေက အထင်သေးကြပြီး၊ အရိုက်ခံရခြင်းနှင့် အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းသည် မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအရာက ကျွန်တော့်ကို မျက်ရည်ကျသည်အထိ မကြခဏ ဝမ်းနည်းစေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်ခုလုံးကို စာထဲတွင်နှစ်မြှုပ်ခဲ့သည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်သည် ဤကဲ့သို့သောဘဝမျိုးကို ဆက်လက်နေသွားရန်မလိုတော့ပဲ အနာဂတ်တွင် အစိုးရအရာရှိတစ်ဦး၊ အကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်ကာ လူတိုင်းက ကျွန်တော့်ကို အထင်ကြီးကြမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော် အထက်တန်းကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ အနီရောင်လုံခြုံရေးသမားများက တော်လှန်ခဲ့်ကြသည်။ အလုပ်သမားများဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားများ ရုတ်တရက်ထွက်၍ သပိတ်မှောက်ကြသည်။ နေ့ရက်တိုင်းက တော်လှန်ရေး နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်နေသည်။ လူတို့သည် ထိတ်လန့်နေကြပြီး ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲစနစ်ကို ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေရန် အခွင့်အရေး ကျွန်တော် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော် ယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ရပါသည်- ကျွန်တော် အပြင်းအထန် နာမကျန်းဖြစ်သကဲ့သို့ ဆိုးရွားစွာခံစားခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော် စဉ်းစားခဲ့သည်။- ကျွန်တော်ကျောင်းထဲဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ မဖြေရသော်လည်း၊ အစိုးရအရာရှိတစ်ယောက်မဖြစ်သော်လည်း ငွေရဖို့အတွက် ကျွန်တော် အစွမ်းကုန်အလုပ်ကြိုးစားမည်။ ငွေရှိသရွေ့ လူတွေက ကျွန်တော့်ကို အလွန်အထင်ကြီးကြလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်မှစကာ ငွေရနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ကျွန်တော် နေရာတိုင်းတွင် ရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မိသားစုသည် အလွန်ဆင်းရဲသဖြင့် လုပ်ငန်းစတင်ရန် ငွေကြေး ကျွန်တော့်ထံတွင် မရှိခဲ့ပေ။ ဆွေမျိုးများနှင့် သူငယ်ချင်းများမှတဆင့် ကျွန်တော်သည် ဝက်စတူးရောင်းသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို စတင်ရန် ယွမ်၅၀ဝ ကို ချေးငှားနိုင်ခဲ့သည်။ အခြားသူများထက်သာသော ဘဝကိုရရှိနိုင်ရန် အနားမယူပဲ နေ့တိုင်း နောက်ကျသည်အထိ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အခက်အခဲများစွာကို သည်းခံခဲ့သည်။ အပင်ပန်းခံအလုပ်လုပ်သည့် နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးသော် ကျွန်တော့်၏ တတ်ကျွမ်းမက ပို၍ ကောင်းမွန်လာပြီး၊ ကျွန်တော့်၏ စီးပွားရေလုပ်ငန်း ပိုပိုပြီး ကောင်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မိသားစုသည် လျင်မြန်စွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာပြီး၊ များစွာသောလူတို့က ကျွန်တော့်ကို အားကျသည့် အကြည့်ဖြင့် ကြည့်ကြလေသည်။
၁၉၉၀ခုနှစ်၏ နွေဦးကာလတွင် ရွာထဲမှလူတစ်ဦးသည် ကျွန်တော့်ကို သခင်ယေရှုအကြောင်း တရားဟောပြောခဲ့ပြီး ယေရှုကို ကျွန်တော် ယုံကြည်လာခဲ့လေသည်။ ထို့နောက်တွင် ကျမ်းစာကို ကျွန်တော် လေ့လာဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပြီး ကျမ်းစာနှင့်ပတ်သတ်သော အသိပညာများကို ရှာဖွေကာ၊ ကျမ်းပိုဒ်အချို့ကို အလွတ်မှတ်မိအောင် အာရုံစိုက်ရင်း မကြာမီတွင် လူသိများသော အခန်းကြီးများနှင့် အပိုဒ်ငယ်များကို အလွတ်မှတ်မိခဲ့လေသည်။ “လူသည် ဤစကြဝဠာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကို အဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်း” ဟု သခင်ယေရှုပြောသည့် မဿဲ၁၆:၂၆ ကို ကျွန်တော် ဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် သခင်ယေရှုမှ ပေတရုကိုခေါ်တော်မှုခြင်းနှင့် သူက ချက်ချင်းဆိုသလို သူ၏ ငါးဖမ်းကွန်ကိုပစ်ကာ ခရစ်တော်နောက်လိုက်ခဲ့သည့်အကြောင်းကိုလည်း ဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ခဲ့သည်။ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ငွေရှိရင် တော်ပါပြီ။ ကျွန်တော် ငွေထပ်ရနေလို့လည်း သေလျှင် မည်သို့အသုံးဝင်မည်နည်း။ သခင်၏ချီးမွမ်းခြင်းကို ရချင်လျှင် ကျွန်ုပ်သည် ပေတရု၏ပုံဥပမာကို လိုက်လျှောက်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်၏လုပ်ငန်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး အသင်းတော်တွင်အချိန်ပြည့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် အလွန်စိတ်ပြင်းပြခဲ့သည့်အတွက် မကြာမီ ဆွေမျိုးများနှင့် သူငယ်ချင်းများမှတဆင့် လူ ၁၉ဦးကို ဧဝံဂေလိပြုနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ထို၁၉ဦးမှ တဆင့် လူ၂၃၀ဦးအထိ တိုးပွားများပြားလာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် သခင်ယေရှု၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့်- “သခင်၊ သခင်ဟု ငါ့ကိုလျှောက်သောသူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်၏ အလိုကိုဆောင်သောသူသာလျှင် ဝင်ရလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၇:၂၁) ကို ကျွန်တော် ဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော် စွန့်လွှတ်ခဲ့သည့်အရာ၊ ကျွန်တော် အသုံးတော်ခံခဲ့သည့်အရာနှင့် သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်ဟောကြားခဲ့သည့်အပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်ုပ်သည် သခင်၏လမ်းကို လိုက်လျှောက်နှင့်နေပြီဟု တွေးရင်းဖြင့် ကျွန်တော် မိမိကိုယ်ကို ပို၍စိတ်ကျေနပ်မိခဲ့ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံက ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို လိုက်လျှောက်သည့်လမ်းပေါ်တွင် ကျွန်တော် ရှိနေပြီး နောက်လာမည့်ခေတ် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ထင်ရှားချိန်တွင် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဘုရင်တစ်ပါးကဲ့သို့ ကျွန်တော် အုပ်စိုးရလိမ့်မည်ဟု ထင်ခဲ့ပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် ကျွန်တော့်၏စိတ်အားထက်သန်မှုက ပို၍ကြီးမားလာခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ နှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်သော “ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လော့” နှင့် “သည်းခံ၍ အပြစ်လွှတ်ကြလော့” တို့ကို ကျွန်တော် လုံးဝလိုက်နာရမည်၊ နမူနာအားဖြင့် ဦးဆောင်သည့်အပြင်၊ ခက်ခဲမှုကို သည်းခံရာတွင်လည်း မကြောက်ရွံ့ဖို့ရန် အပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ တခါတရံတွင် ကျွန်တော့်၏ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအိမ်သို့ သွားချိန်တွင် သူတို့ကိုရေသယ်ခြင်း၊ မီးမွေးပေးခြင်းနှင့် လယ်အလုပ်တို့ကို ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူတို့ဖျားနာချိန်တွင် သူတို့ထံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ထံတွင် လုံလောက်သောငွေကြေး မရှိသည့်အခါ၊ ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းငွေများဖြင့် သူတို့ကိုကူညီခဲ့သည်။ ဒုက္ခရောက်နေသူမည်သူ့ကိုမဆို ကျွန်တော့်သွားရောက်ကူညီခဲ့သည်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး၏ ချီးမွမ်းမှုများနှင့်၊ အသင်းတော်မှ အထက်ခေါင်းဆောင်များ၏ ယုံကြည်မှုကို ကျွန်တော် လျင်မြန်စွာရရှိခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်၊ အသင်းတော် ၃၀ ကို အုပ်ထိန်းဖို့ အသင်းတော် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်တော် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံခဲ့ပါသည်။ ယုံကြည်သူ ပေါင်း ၄၀ဝကို ကျွန်တော် စီမံကွပ်ကဲခဲ့ရပါသည်။ ဤရာထူးကို ကျွန်တော် ရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အားရကျေနပ်မိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်၏ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းနှင့် ကြိုးပမ်းမှုများက နောက်ဆုံးတွင် အကျိုးရှိပြီဟု ခံစားခဲ့ရသည်၊ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားထဲတွင် ပို၍မြင့်မားသောရာထူးကို ရယူရန်၊ ပို၍များပြားသော လူတို့၏ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် နှစ်သက်မှုကိုရရှိရန် အစရှိသော ပိုမြင့်မားသော စိတ်ကူးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ပင်ပန်းဆင်းရဲသောအလုပ်ကို နောက်ထပ်တစ်နှစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှတဆင့် အသင်းတော် ၄၂၀ ကို အုပ်ထိန်းရင်း ကောင်တီငါးခုအတွင်းမှ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များကို ခေါင်းဆောင်ရသည့် အထက်ပိုင်း အသင်းတော် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် အရှိန်လျော့ကျသွားမည်ကိုပို၍ ကျွန်တော် ကြောက်ရွံ့ခဲ့သဖြင့် အပေါ်ယံတွင် ကျွန်တော့်၏ ကောင်းသော အမူအကျင့် နှင့် ကျွန်တော့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များနှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားကြားတွင် ကျွန်တော့်၏ပုံရိပ်ကို တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် ကျွန်တော် အထူးအာရုံစိုက်ခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော့်၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များ၏ ထောက်ခံမှုကိုရရှိကာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများမှ ကျွန်တော့်ကို အထင်ကြီးကြစေရန် အသင်းတော်တွင်း လွန်ကဲသော အစားအသောက်များကို ကျွန်တော် ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် အသင်းသားများကြား ဆက်သွယ်မှုအားလုံးနှင့် မကောင်းသော အလေ့အထများတို့ကို တားမြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်၏ “ဖြောင့်မတ်မှုနှင့် တရားမျှတမှု” သည် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များနှင့် အခြားသောညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ထံမှ ထောက်ခံမှုနှင့် သဘောကျနှစ်ခြိုက်မှုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားသော သဘာဝသည်လည်း ကြီးမားလာပြီး အထိန်းအကွပ်ပိုမဲ့လာပါသည်။ ထို့ထက်ပိုသည်မှာ ကျမ်းစာအတွင်းမှ လူသိများသော ကျမ်းပိုဒ်အချို့ကို ကျွန်တော် ရှေ့နောက်နောကျေစွာသိလေသည်။ အသင်းတော်အောက်အဆင့်မှ ခေါင်းဆောင်များ၊ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်အချို့တို့နှင့်တွေ့ဆုံချိန်နှင့် တရားဟောချိန်တွင် ကျမ်းစာကိုမကြည့်ပဲ ထိုကျမ်းပိုဒ်များကို ကျွန်တော် အလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများသည် ကျွန်တော့်ကို အလွန်အားကျကြသဖြင့် အသင်းတော်တွင် နောက်ဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်တော် အမြဲ ချခွင့်ရခဲ့လေသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ကျွန်တော့်ကို နားထောင်ကြသည်။ ကျွန်တော် ပြောသောအရာသည်မှန်ကန်သည်၊ မြင့်မားသော သိနားလည်မှု ကျွန်တော်ရှိသည်ဟု အမြဲထင်ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် အသင်းတော်အုပ်ချုပ်မှု၊ အသင်းတော်များကို အပိုင်းခွဲခြင်း သို့မဟုတ် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များ နှင့် လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များအဖြစ် ရာထူးတိုးခြင်းတို့တွင််ထိုအကြောင်းအရာတို့ကို အခြားသူများနှင့် ကျွန်တော် ဆွေးနွေးခြင်းမပြုပေ။ ကျွန်တော် ပြောသောအရာတိုင်းကို အမြဲအတည်ယူကြလေသည်။ “ဘုရင်တစ်ပါး၏အစိုးရမှု”ကို ကျွန်တော် အမှန်တကယ်ရခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် အထူးသဖြင့် စင်ပေါ်တွင်မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ အာဝဇ္ဇန်းရွှင်စွာနှင့် စကားအတောမသတ်နိုင်အောင် ပြောခြင်းကို ကျွန်တော် နှစ်ခြိုက်ခဲ့ပြီး၊ လူတိုင်းက ကျွန်တော့်ကို ကြည်ညိုလေးစားမှုဖြင့် ငေးကြည့်နေပါက ထိုဇမ္ဗူတလူ ဖြစ်ရသည့် ခံစားချက်သည် ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဆောင်သိမ်းပိုက်ပြီး အရာအားလုံးကို မေ့လျော့သွားစေခဲ့သည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၂:၄၄-၄၅ “ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် ငါ့ကိုသာယုံကြည်သည်မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော သူကိုယုံကြည်၏။ ငါ့ကိုကြည့်မြင်သောသူသည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကိုကြည့်မြင်၏” ကို ကျွန်တော် ဖတ်သည့်အခါ အထူးသဖြင့် ထိုသို့ခံစားခဲ့ရသည်။ ယင်းကို ကျွန်တော် အမှန်တကယ်မွေ့လျော်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော်က ဘုရားသခင်၏ စေလွှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ကာ၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ပေးခဲ့ပြီးကာ၊ ကျွန်တော်မှတဆင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် ဖော်ပြခြင်းခံရသည်ဟု အရှက်မဲ့စွာယုံကြည်ခဲ့လေသည်။ ကျမ်းပိုဒ်များကို ကျွန်တော် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည့်အတွက် အခြားသူတို့နားမလည်နိုင်သော “နက်နဲမှုများ”ကို နားလည်နိုင်ပြီး အခြားသူများ နားမလည်နိုင်သော “အနက်များ”ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်ရာထူးက ယူဆောင်လာသော စိတ်ကျေနပ်မှုအတွင်းတွင် နှစ်မြှုပ်ရန်ကိုသာ ကျွန်တော် ဂရုပြုခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းခံတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်အတွက် အသုံးတော်ခံတစ်ခုသာ ဖြစ်ကြောင်းကို လုံးဝမေ့ပျောက်ခဲ့ပါသည်။
အသင်းတော် ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်တော့်၏နာမည်ဂုဏ်သတင်းသည်လည်း ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး ကျွန်တော် သွားသည့်နေရာတိုင်းတွင် ရဲများကလိုက်ကြလေသည်။ တစ်ကြိမ်တွင် အဝတ်အစားအချို့ကို ကျွန်တော်ပြန်ယူနေစဉ် ရဲများ၏ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို အလုပ်ကြမ်းနှင့် ပြန်လည်ပညာပေးခြင်း ပြစ်ဒဏ်သုံးနှစ်ချခဲ့သည်။ ထိုသုံးနှစ်အတွင်း ဆိုးရွားသောညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် ဖိစီးနှိပ်စက်မှုမျိုးစုံ ကို ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသည်။ ယင်းသည် အရေပြားအလွှာကို ခေါင်းမှခြေမ အထိလွှာချခြင်းခံရသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး နေ့ရက်တိုင်းသည် အမှန်တကယ်ပင် တစ်နှစ်ကဲ့သို့ကြာမြင့်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထောင်မှ ကျွန်တော်ထွက်လာပြီးနောက် မူလရာထူးနေရာကိုလည်းပြန်လည်ရရှိကာ ယခင်ကနည်းတူ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအမြင့်မားဆုံးဖြင့် ဧဝံဂေလိတရားကို ဆက်လက်ဟောပြောခဲ့လေသည်။ နောက်ထပ်ခြောက်လကြာပြီးနောက် နောက်တစ်ကြိမ် ဒေသတွင်း အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးမှုကို ကျွန်တော် ခံခဲ့ရပြီး အလုပ်ကြမ်းနှင့် ပြန်လည်ပညာပေးခြင်း ထောင်ဒဏ်နောက်ထပ် သုံးနှစ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပြန်သည်။ ထိုအတောအတွင်းတွင် သူတို့ကကျွန်တော့်ကို ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ညှင်းပန်းခဲ့ကြပြီး၊ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတစ်ခုတွင် နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း၇၀ ထားခဲ့ကြလေသည်။ ထို့နောက်တွင် အုတ်ခဲများသယ်ရသည့် အလုပ်ကြမ်းစခန်းသို့ ကျွန်တော် အပို့ခံခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်သည် သတ္တမလဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုက ပူလောင်လှပါသည်။ မီးဖိုမှအပူချိန်သည် ၇၀ဒီဂရီစငတီဂရိတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပြီး နေ့တိုင်း အုတ်ခဲ ပေါင်း ၁၀ဝ၀ဝ ကျော်ကို ကျွန်တော် သယ်ဆောင်ရပါသည်။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့် ယခင်က ဆိုးရွားသော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်တို့ပေါင်းကာ ကျွန်တော့်၏ကိုယ်ခန္ဓက အလွန်ပင် အားနည်းခဲ့သည်။ အပူတောထဲတွင် ထိုသို့သော အလုပ်ကြမ်းမျိုးကို ရုပ်ပိုင်းအရ ကျွန်တော် မခံစားနိုင်ခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် ရက်စက်သောအစောင့်တို့သည် ယင်းကို ဂရုမစိုက်ပေ။ ကျွန်တော့်အလုပ်များကို ကျွန်တော် မပြီးနိုင်သည့်အခါ သူတို့က် ကျွန်တော့်လက်များကို နောက်ကျောဘက်တွင် လက်ထိပ်ခတ်လိုက်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်ခိုင်းကာ ကျွန်တော့်၏ချိုင်းနှင့် ဒူးနောက်တို့တွင် ပုလင်းများ ထားလေသည်။ ထို့နောက်သူတို့က ကျွန်တော့်ကို လျှပ်စစ်တုတ်များဖြင့််ကျွန်တော့်အသားထဲ လက်ထိပ်များ နက်ရှိုင်းစွာ စိုက်ဝင်သည်အထိ ရိုက်နှက်လေသည်။ ယင်းသည် မတွေးနိုင်လောက်အောင် နာကျင်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့သော ရက်စက်သည့် ညှင်းပန်းနှိပ်စပ်မှုမျိုးကိုခံရသဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် အလုပ်ကြမ်းကို ခုနှစ်ရက်သာလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထိုနေ့တွင် မီးဖိုထဲတွင် မေ့မျောခဲ့ပါသည်။ ၅၂နာရီအကြာအထိ ကျွန်တော် ကယ်ဆယ်မခံခဲ့ရပါ။ ကျွန်တော် စိတ်ကစင့်ကလျားဖြစ်ဖြစ်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော် အသိစိတ်ရှိပြီး မြင်နိုင်ကြားနိုင်သည်မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ကျွန်တော် မစားနိုင်၊ မပြောနိုင်၊ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ပါ။ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပင် ကျွန်တော် မသိတော့ပါ။ စီစီပီအစိုးရ၏ ထိုသို့သော နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရပြီးသည့်နောက်တွင် ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားသော သဘာဝသည် ကြီးမားစွာ ရှုံးနှိမ့်ခဲ့လေသည်။ အသင်းတော်တွင်ရှိခဲ့သော စွမ်းအားနှင့် မောက်မာမှု တို့နှင့်ဆိုင်သည့် ခံစားချက်က ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော် စိတ်ဓါတ်ကျကာ အဆိုးမြင်လာခဲ့သည်။ အတိုင်းမသိ ဒုက္ခခံစားရမှုနှင့် အကူအညီမဲ့မှုတို့အလယ်တွင် ကျွန်တော် နေထိုင်နေခဲ့ရပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထိန်းသိမ်းရေစခန်းမှလူများသည် ကောက်ကျစ်သောအကြံတစ်ခုရလာကာ ကျွန်တော့်မှာ “မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှု”တစ်ခုရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် မှတ်တမ်းအမှားတစ်ခုကို ပြုလုပဖို့ ဆရာဝန်တစ်ဦးကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့က ကျွန်တော့် ဇနီးသည်ကို ခေါ်ကာ ကျွန်တော့်ကို လာရောက်ခေါ်ယူစေပြီး အိမ်သို့ ပြန်ခေါ်သွားစေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်၏ အခြေအနေကို ကုသရန်အတွက် အိမ်တွင်ရှိသောအရာအားလုံးကို ရောင်းချခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်၏ အမျိုးများက ကျွန်တော့်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုချိန်တွင် သူတို့သည် အလွန် ငေါ့ကာ၊ ရိုင်းပြပြီး လှောင်ပြောင်ကြလေသည်။ဤသို့သောအခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါ ကျွန်တော် စိတ်ပျက်အားလျော့ပြီး လောကကြီးက အမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေသည်၊ လူတို့အကြားတွင် မိသားစု ချစ်ခြင်း မေတ္ကာမရှိပဲ ဆိုးရွားသောညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် အသရေဖျက်ခြင်းတို့သာ ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝ၏ ဤသို့သော နာကျင်သည့် နာမကျန်းမှုနှင့် မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှုကို ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ကျွန်တော် မည်သို့ရှေ့ ဆက်နိုင်မည်ကို မသိခဲ့ပါ။
စိတ်ပျက်အားလျော့မှုတွင် ကျွန်တော် နစ်မြှုပ်နေစဉ်တွင် အနန္ဘတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ထံ ကယ်တင်ခြင်း လက်ကမ်းလင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး တစ်လ ကျော်အကြာတွင် ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးတို့သည် ကျွန်တော့် နောက်ဆုံးသောကာလ ဘုရားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကို လာရောက်ဟောကြားခဲ့ပြီး၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အလုပ်အဆင့်အသစ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း လူသားမျိုးနွယ်ကို ကယ်တင်ရန် သူ၏ ဒုတိယအကြိမ်လူ့ဇာတိခံ ယူခြင်းအကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ယင်းကို ကျွန်တော် လုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပါ။ သို့သော် ကျွန်တော် စကားမပြောနိုင်သဖြင့် ကျမ်းစာတွင်းမှ ကျမ်းပိုဒ်အချို့ကို သူတို့အား ပြခဲ့လေသည်။ ဤသည်မှာ သူတို့ကို ကျွန်တော် ပြန်လည်ချေပသည့် ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က နူးညံ့စွာဖြင့် “ညီအစ်ကို၊ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ နှိမ့်ချစွာရှာဖွေတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားရပါမယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော်ဟာ အမြဲတမ်းသစ်နေပါတယ်။ အဲဒါက အရှေ့ကိုပဲအမြဲတမ်း ဆက်သွားနေပြီး၊ သူရဲ့ ဉာဏ်ပညာကို လူသားမျိုးနွယ်တွေ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အတိတ်မှာ ချည်းပဲ ပိတ်မိမနေသင့်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတော်ခေတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော်ကို ကျွန်တော်တို့ စွဲကိုင်ထားဘူးမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်ခေတ်ထဲကို ခင်ဗျား ဝင်ရောက်နိုင်မှာလား။ ကျမ်းစာထဲမှာ သခင်ယေရှုပြောတဲ့အရာအားလုံးဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ ရှိတယ် ဆိုတာ ပြောစရာမလိုပါဘူး” ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားလေသည်။ ထို့နောက်သူတို့သည် ကျွန်တော်ဖတ်ရန်အတွက် အနန္ဘတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖွင့်ပြလေသည်။ ထို့နောက် နောက်ဆုံးသောကာလ ဘုရားသခင်၏အမှုတော်နှင့်ဆိုင်သည့် ကျမ်းစာတွင်းမှ ပရောက်ဖက်ပြုချက်များစွာကို ကျွန်တော့်အတွက် ရှာတွေ့ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် ကျွန်တော့် ညီအစ်ကိုများ၏ မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင့် နာမ၏အဓိပ္ပါယ်၊ သူ၏ အမှုတော် အဆင့်သုံးဆင့်ထဲက အတွင်းပိုင်းသမ္မာတရား၊ လူသားမျိုးနွယ်တို့အပေါ် သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု ရည်ရွယ်ချက်၊ သူ၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း နက်နဲမှုများ၊ သမ္မာကျမ်း၏အတွင်းကျကျ အမှန်တရား၊ နှင့် အခြားအရာတို့ကို ကျွန်တော် နားလည်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအရာများသည် ကျွန်တော့် ဘဝတွင် တစ်ခါမ ှမကြားဖူးသောအရာဖြစ်သကဲ့သို့ သမ္မာကျမ်းစာကို ကျွန်တော် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပင်ပင်ပန်းပန်း လေ့လာနေခဲ့စဉ်က ကျွန်တော် တစ်ခါမှ နားမလည်ခဲ့ဖူးသော နက်နဲမှုများနှင့် သမ္မာတရားများဖြစ်ပေသည်။ ယင်းကို ကျွန်တော် မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် နားထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် လုံးဝ ယုံကြည်လက်ခံမိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ကျွန်တော့်၏ညီအစ်ကိုများက ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကျွန်တော့်ကို ပေးပြီး၊ “အစ်ကိုသက်သာလာရင် အစ်ကို့လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို အစ်ကိုဧဝံဂေလိဟောကြားနိုင်ပါတယ်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင့် နှုတ်ကပတ်တော်စာအုပ်ကို ကျွန်တော် အလွန်ပျော်ရွှင်စွာ လက်ခံခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အိပ်ရာထဲတွင် ကျွန်တော် တစ်နေ့လုံးလဲလျောင်းပြီး ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဖတ်ရှုရုံသာပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဖတ်ရင်းနှင့် ကျွန်တော် ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ ရေထဲသို့ပြန်ခွင့်ရသော ငါးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ တောင့်တမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ကျွန်တော် ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော် အလွန်ပျော်ရွှင်ပြီး ကျေးဇူးတင်မိခဲ့ပါသည်။ မကြာမီတွင် ကျွန်တော့်ကျန်းမာရေးက် တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော် အိပ်ရာမှထကာ ဟိုနားဒီနား လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ဘဝတွင် ပို၍ အမှီအခိုကင်းကင်း နေနိုင်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် အသင်းတော်တွင် နေထိုင်သည့် အသက်တာအတိုင်း ကျွန်တော့်၏အိမ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ အပတ်တိုင်း အစည်းအဝေးနှစ်ကြိမ်ရှိပါသည်။
တစ်ကြိမ်တွင် အသင်းတော်က အသက်၁၇ သို့မဟုတ် ၁၈နှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးကို ကျွန်တော်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ကျွန်တော့်၏ မူလဂိုဏ်းဂဏမှ အစ်ကိုတစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမဖြစမီတွင် သူမ၏အိမ်သို့ မကြာခဏ သွားလေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်စဉ်းစားမိပါသည်။ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အစီအစဉ်တွေ ဘာဖြစ်နေတာပါလဲ။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော့်ကိုလာပြီး လမ်းညွှန်ဖို့ စေခိုင်းတာဟာ ကျွန်တော့်အပေါ် သူတို့အထင်သေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်တော့်၏ မနာထောင်လွှားသော သဘာဝ၏ အုပ်စိုးမှုအောက်တွင် မနှစ်မြို့မှုဖြင့် ကျွန်တော်က “မင်း အသက်ရှင်လာတဲ့နှစ်တွေထက် ပိုပြီးတော့ ကျုပ်ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီးပြီ။ မင်းအိမ်ကို ကျုပ်သွားလေ့ရှိတုန်းက မင်းကအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက မင်းနဲ့အတူ ကျုပ် ဆော့ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မင်းကကျုပ်ကိုလမ်းညွှန်ဖို့လာတယ်...” ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ညီမငယ်သည် ကျွန်တော်ပြောသော စကားကြောင့် မျက်နှာနီရဲသွားပြီး နောက်တစ်ဖန်မလာရဲတော့ပေ။ အသင်းတော်က ကျွန်တော်နှင့်အတူ လာရောက်မိဿဟာရဖွဲ့ရန် အခြားညီအစ်မတစ်ဦးကို လာရောက်စေရုံမှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပေ။ သူမသည်လည်း အတော်ပင် ငယ်ရွယ်သည်ကို ကျွန်တော်တွေ့သောအခါ ကျွန်တော် ဘာမှမပြောတော့ပါ။ သို့သော် “ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်တဲ့ နှစ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အရည်အချင်းတွေ၊ ကျမ်းစာ အသိပညာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် အသင်းတော်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က ခင်ဗျားထက် အဖက်ဖက်မှာ ပို၍တော်ပါတယ်။ ခင်ဗျား အသက်ကိုကြည့်ရတာတော့ ခင်ဗျား ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်လာတာ အလွန်ဆုံးသုံးနှစ် ဒါမှမဟုတ် လေးနှစ်ပဲ ရှိဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ကျွန်တော် ယုံကြည်ခဲ့တာ ၂၁နှစ်ရှိပြီ။ ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကို လမ်းညွှန်ပေးဖို့ အရည်အချင်း ဘယ်လိုရှိနိုင်မှာလဲ”ဟု ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုညီမသည် စကားအရာတွင် အလွန် ကျွမ်းကျင်ကြောင်းကို မည်သူသိနိုင်ပါလိမ့်မည်နည်း။ သူမသည်ပွင့်လင်းစွာ နှင့် ထက်ထက်မြက်မြက် စကားပြောပါသည်။ တွေ့ဆုံချိန်တွင် သူမသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ချက်ချင်းဖွင့်ကာ အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဖတ်ပါသည်။ “လူအချို့သည် ပေါလုကို အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ကြသည်၊ ၎င်းတို့သည် အပြင်ထွက်၍ ဟောပြောခြင်းနှင့် အမှုပြုခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အတူတကွ ဆုံစည်းခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်၊ သူတို့သည် လူတို့ကို နားထောင်စေခြင်းငှာ၊ သူတို့ကို ကိုးကွယ်စေခြင်းငှာနှင့် ခြံရံစေခြင်းငှာ အလိုရှိကြသည်။ သူတို့သည် အခြားသူများ၏စိတ်ထဲ၌ ဂုဏ်ဒြပ်ရှိလိုကြပြီး အခြားသူများက သူတို့၏ပုံရိပ်ကို တန်ဖိုးထားရှိသည့်အခါ သဘောကျကြသည်။... အကယ်၍ ထိုသူသည် ဤကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ပြုမူပါက သူသည် မောက်မာ၍ ထောင်လွှားသောသူဖြစ်ကြောင်း ပြသရန် လုံလောက်၏။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို လုံးဝ မကိုးကွယ်ပေ။ မြင့်မားသော ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်ကို သူရှာဖွေပြီး အခြားသူများအပေါ် သြဇာအာဏာ ရှိလိုကာ ထိုသူများကို ပိုင်ဆိုင်လိုပြီး ထိုသူတို့၏ စိတ်များထဲ၌ ဝိညာဉ်အသက်တာ ရှိလိုသည်။ ဤသည်မှာ စာတန်၏ စံပြ ပုံရိပ်ပင် ဖြစ်သည်။ သူ့သဘာဝနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုပေါ်လွင်နေသည့်အရာမှာ မောက်မာမှုနှင့် ထောင်လွှားမှုဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရန် မလိုလားမှုနှင့် အခြားသူများ၏ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံလိုမှုတို့ ဖြစ်သည်။ ဤအပြုအမူများမှ သူ၏သဘာဝကို သင် ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်သည်။” (ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “လူ့သဘာဝကို သိရှိရန် နည်းလမ်း”) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များသည် ကျွန်တော့်၏နှလုံးသားကို အသွားနှစ်ဖက်ရှိသော ဓါးကဲ့သို့ စူးနစ်ကာ ကျွန်တော့်ကို တိုက်ရိုက်ထိခဲ့ပါသည်။ ယင်းက ကျွန်တော့်၏စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသော ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းတွင် ကျွန်တော့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အကျည်းတန်မှုအပြင်ကျွန်တော့်သဘာဝ၏ စစ်မှန်သော အနှစ်သာရအတွက် ပြတ်သားလှသော ဖော်ထုတ်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှက်တရားဖြင့် ကျွန်တော် ပြည့်နေပြီး ပျောက်ကွယ်သွားရုံမှလွဲ၍ အခြားအရာတို့ကို အလိုမရှိတော့ပေ။ ဘုရားသခင့် နှုတ်ကပတ်တော်များထဲတွင် ဖော်ထုတ်ထားသည့်အတိုင်းပင်၊ ကျွန်တော် ဖော်ပြသောအရာကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်သောအခါ ထိုအချိန်တွင်မှ ကျွန်တော့်၏သဘာဝကအလွန် မောက်မာသည်ကို သတိပြုမိပြီး၊ အနှစ်သာရအားဖြင့် ကျွန်တော် ဘုရားသခင်အပေါ်ရန်လိုခဲ့သည်ကို သတိထားမိပါသည်။ ယခင်က လူအထင်ကြီးရန်၊ အားကျစေရန်၊ အခြားသူများအပေါ် ကွပ်ကဲစီမံရသည့် သူတစ်ဦးဖြစ်စေရန်၊ ပိုမြင့်သောအဆင့်တစ်ခုတွင် ရှိရန်၊ ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းတွင် ကျွန်တော် ပြင်းထန်စွာကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ ကျမ်းစာအသိပညာများဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ပြင်ဆင်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဤအရာကြောင့် ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်ရုံမက်ခဲ့သည့် ရာထူးနှင့် အဆင့်အတန်းတို့အပြင် လူတိုင်း၏ အားပေးမှုကိုပါ ရရှိခဲ့လေသည်။ အခြားသူတို့၏အားကျမှုမှတဆင့် ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်၏ ကိုယ်ပိုင် အတ္တကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဒေသနာဟောခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ အာဏာကိုချုပ်ကိုင်မှုအားဖြင့် ကျွန်တော်သည် မိမိကိုယ်ကိုထင်ရှားစေခဲ့ပြီး ကြွားဝါခဲ့ပါသည်။ စင်ပေါ်တွင် ကျွန်တော် ရပ်နေစဉ် ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်သည့် ခံစားမှုကြောင့် အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီး၊ သက်သေခံရန်အတွက်နှင့် မိမိကိုယ်ကိုတင်မြှောက်ရန်အတွက် ကျမ်းစာတွင်းမှ ကျမ်းပိုဒ်များကိုပင် အရှက်ကင်းမဲ့စွာ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို ဘုရားသခင်ကစေလွှတ်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ အလွန့်အကျွံပင် ကျွန်တော့် မာနထောင်လွှားခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့တွင် တရားဟောကြားခဲ့သောနှစ်များစွာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်အသုံးပြုကာ ထိုညီမကို ကျွန်တော် အထင်သေးခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော် သူ့ထက်နှစ်ပေါင်းများစွာယုံကြည်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော့်ထံတွင် ကျမ်းစာဗဟုသုတ ပိုရှိကာ အသင်းတော်အုပ်ချုပ်ခြင်းတွင် အတွေ့အကြုံပိုရှိ၍ ကျွန်တော် လူတိုင်းထက်ပိုတော်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ မည်သူ့ကိုမျှ ကျွန်တော် စဉ်းစားခြင်းမရှိပဲ ထိုညီမနှစ်ဦးကို လျှော့တွက်ကာ အထင်သေးမိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်၏စကားလုံးများက ဦးတည်ချက်ရှိပြီး နာကျင်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်တော့်၏အာရုံနှင့် လူသားဆန်မှုကို ကျွန်တော် မာနထောင်လွှားမှုအပြည့်ဖြင့် ပျောက်ဆုံးစေခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါတွင်မှသာ ကျွန်တော့်၏ ရှာဖွေလိုက်စားမှုက ဘုရားသခင်ကို တွန်းလှန်မှုနှင့် သူ့အား ဆန့်ကျင်နေကြောင်းကို သတိပြုမိပါသည်။ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသော သူများအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော် တွန်းလှန်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ အသက်ရှင်နေထိုင်နေပုံမှာ စာတန်၏အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ရင်ဆိုင်ရသောအခါ ကျွန်တော် ဝန်မခံပဲမနေနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်တော်က “အိုး…ဘုရားသခင် ကျွန်တော် အရမ်း မာနထောင်လွှားမိပါတယ်။။ ကျွန်တော့် မှာရာထူးရှိရှင် ကျွန်တော်က မြင့်မြတ်ပြီး အင်အားကြီးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် မှာ ရာထူးမရတဲ့အခါ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ နားမထောင်ခဲ့သေးဘူး။ လူတွေကို အုပ်စိုးပြီး အသုံးချဖို့ သူတို့ကို အထင်သေးဖို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အရည်အချင်းဟောင်းတွေနဲ့ အာဏာတို့ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရမ်းပဲ အရှက်ကင်းမဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ကိုယ်တော့်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်တော် လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တော့်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲက ထုတ်ဖော်ပြမှုတွေနဲ့ တရားစီရင်မှုတွေကို လက်ခံဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။” ဟုဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်တွင် ထိုညီမငယ်သည် ကျွန်တော် ဖတ်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များထဲမှ အခြား စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကို ဖွင့်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းမှာ- “လူ့အသိဉာဏ်သည် နဂိုအသုံးဝင်မှု ပျောက်ဆုံးကာ လူ့အသိစိတ်သည်လည်း နဂိုအသုံးဝင်မှု ပျောက်ဆုံးလေပြီဟု ငါဆိုသည်။ ငါကြည့်မျှော်သော လူသားသည် လူအရေခြုံထားသော သားရဲ၊ အဆိပ်ပြင်းသော မြွေဖြစ်သည်။ ငါ့မျက်စိရှေ့တွင် သနားဖွယ်ဖြစ်အောင် မည်မျှကြိုးစားသော်လည်း ငါသည် သူ့ကို မည်သည့်အခါမျှ သနားမည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူသားသည် အဖြူနှင့်အမဲကြားရှိ ခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်းမရှိ၊ သမ္မာတရားနှင့် သမ္မာတရား မဟုတ်ခြင်းကြားရှိ ခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူသားသည် အသိဉာဏ် ထုံထိုင်းလှသော်လည်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ရရှိရန် တောင့်တဆဲရှိသည်။ သူ၏ လူ့သဘောသဘာဝသည် အလွန်သိက္ခာမဲ့လျက်ပင် သူသည် ရှင်ဘုရင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ဆန္ဒပြုဆဲရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အသိဉာဏ်ဖြင့် သူသည် မည်သူတို့၏ ရှင်ဘုရင် ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ထိုသို့သော လူ့သဘောသဘာဝဖြင့် ရာဇပလ္လင်ပေါ်တွင် မည်သို့တက်ထိုင်အံ့နည်း။ လူသားသည် အကယ်စင်စစ်ပင် အရှက်မရှိပါတကား။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော စိတ်ကြီးဝင်နေသူ ဖြစ်သည်။ သင်တို့ အထဲတွင် ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ရယူလိုသူများသည် ကြည့်မှန်ယူ၍ အကျည်းတန်သော မိမိ၏ ရုပ်သွင်ကို ရှုစားကြရန် ငါတိုက်တွန်းသည်။ သင့်တွင် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ထိုက်သော ဥပဓိရုပ် ရှိသလော။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ခံစားထိုက်သူ၏ မျက်နှာမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိသလော။ သင်၏ စိတ်သဘောထားထဲ၌ ပြောင်းလဲခြင်း စိုးစဉ်းမျှပင် မရှိသည့်အပြင် မည်သည့် သမ္မာတရားကိုမျှလည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း မရှိသော်လည်း သင်သည် အံ့မခန်းဖွယ် မနက်ဖြန်ကို မျှော်နေသေးသလော။ သင်သည် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ လှည့်ဖြားလေပြီ။” (နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ ထဲက “မပြောင်းလဲသော စိတ်သဘောထား ရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူ ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်”) ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဖတ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျွန်တော် မျက်နှာပေါ် မျက်ရည်များ စီးကျလာသည်ကို ကျွန်တော် မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်စာကြောင်းတိုင်းသည် ကျွန်တော့်၏နှလုံးသားကို စူးဝင်မိသည်ဟု ကျွန်တော် ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်သည် သူ၏တရားစီရင်မှုကို ပြင်းထန်စွာခံစားခဲ့ရပြီး၊ အထူးသဖြင့် အရှက်ရိုခဲ့ရပါသည်။ ယခင်အသင်းတော်တွင် ကျွန်တော့်၏ ဘုရင်တပါးကဲ့သို့ အုပ်စိုးခြင်းအပေါ် ရှက်ဖွယ်ကောင်းသော ကျွန်တော့်၏ ရှာဖွေလိုက်စားခြင်း မြင်ကွင်းတို့သည် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် ပေါ်လာပါသည်။ ကျွန်တော့်က၏ညီအစ်ကို မောင်နှမများကြားတွင် ကျွန်တော်သည် အမြဲတမ်း အမြင့်ဆုံးနေခဲ့ပြီး၊ ကြီးမြတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဝန်းကျင်မှ လူများကို အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်လိုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ညီအစ်ကို မောင်နှမများကို ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကို သူတို့သိရှိစေရန် ကူညီပေးခဲ့ခြင်းမရှိသည်သာမက အလွန်မြင့်မြတ်သော၊ ကြီးမြတ်သောသူအဖြစ် ကျွန်တော့်ကို ဆက်ဆံစေရန် ဦးဆောင်ခဲ့မိပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ရွံစရာကောင်းပြီး ထိုက်တန်မှုမရှိသည့်အတွက်၊ ကျွန်တော့်၏ညီအကိုမောင်နှမများကို စိတ်ပျက်အောင်ပြုမိသည့်အတွက် ထိုအကြောင်းကို ကျွန်တော်တွေးလေလေ ကျွန်တော့်၏အပြုအမူများသည် ဘုရားသခင်ကိုရွံ့ရှာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် ပိုခံစားရလေဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် အတိုင်းထက်အလွန် အရှက်ရမှုကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဆန္ဒများအတွက် ကျွန်တော့်ပေးအပ်ခဲ့သော အဖိုးအခသည် တန်ဖိုးမရှိကြောင်း တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ရာထူးကို အသည်းအသန် ရှာဖွေမှုနှင့် အခြားသူများ၏ အထင်ကြီးခြင်းခံရမှုများသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ နေ့ရောညပါ ကျွန်တော် လှုပ်ရှားသွားလာနေခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို သည်းခံခဲ့ပြီး အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီးထောင်ထဲ ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခံခဲ့ရသည်၊ ညှင်းဆဲခံခဲ့ရပြီး သေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယင်းသည် ကျွန်တော့်ကို ဘုရားသခင်ကို နားလည်လာမှု မရှိစေခဲ့ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားသော သဘာဝသည် ပို၍ပင် ထောင်လွှားလာပြီး ဘုရားသခင်အပေါ်ရိုသေမှု နည်းသထက်နည်းကာ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော် ထင်ရှားချိန်တွင် ဘုရင်တစ်ပါးကဲ့သို့ ကျွန်တော် အုပ်စိုးနိုင်မည်ဟု မှားယွင်းစွာတွေး ထင်မိခဲ့သည့် အဆင့်ထိရောက်လာခဲ့ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ယခင်အသင်းတော်၌ စီစီပီ၏ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ကျွန်တော် ခံရခြင်းသည် ဘုရားသခင်မှ သူ၏နောက်ဆုံးသောကာလ အမှုတော်ကို ကျွန်တော် ပိုလက်ခံလာနိုင်စေရန် အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော် သတိပြုမိခဲ့ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ကျွန်တော်၏ ယခင်အသင်းတော်မှ သိက္ခာနှင့် အဆင့်အတန်းပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်စေ၊ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော် အရေးမထားသည့် အချက်နှင့် ကျွန်တော့်၏ အလွန့်အကျွံ မာနထောင်လွှားသော စိတ်သဘောထားအပေါ် အခြေခံ၍ဖြစ်စေ ကျွန်တော့်၏ ရာထူးကို လုံးဝအလွယ်တကူ စွန့်လွှတ်ကာ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော် လက်ခံနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော်သည် အခြားသောသူများ ဘုရားသခင်ထံပြန်လာသည်ကို တားမြစ်သော မကောင်းဆိုးဝါးနောက်လိုက်တစ်ဦး၊ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ကာ နောက်ဆုံးတွင် သူ၏အပြစ်ပေးမှုကို ခံစားရမည့်သူတစ်ဦးသာ အသေအချာဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်း နှင့် ကျွန်တော့်အပေါ် သူ၏ကြီးမြတ်သော ခွင့်လွှတ်မှုတို့အတွက် ကျွန်တော့်၏ နှလုံးသားမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးမတင်ပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မှတဆင့် ထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ခပ်လျှိုလျှို နေထိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်၏ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုင်းပျပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့ခြင်းတို့ ကျွန်တော် ထပ်မံမပြုရဲတော့ပါ။
ဘုရားသခင်၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကာကွယ်မှုအောက်တွင် ကျွန်တော့်၏ ကျန်းမာရေးက တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်က အိမ်ရှင်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ကျွန်တော့်ကို စီစဉ်ခဲ့လေသည်။ ထိုအကြောင်းကြားသည့်အခါ ယင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်တော် အလွန်ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါ။ အိမ်ရှင်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကျွန်တော့်၏ အစွမ်းအစများကို ဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော် မငြင်းဆန်နိုင်သဖြင့် မကျေမနပ်စွာဖြင့် သဘောတူခသည်။ ကျွန်တော် အိမ်ရှင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်စဉ်တွင် ကျွန်တော့်အိမ်၌ ညီအစ်ကို မောင်နှမအချို့တို့တွေ့ဆုံကြပြီး၊ သူတို့က တံခါးအပြင်ဘက်တွင် စောင့်ကြည့်ပေးရန် ကျွန်တော့်ကို ပြောကြလေသည်။ ကျွန်တော့်၏ အတွင်းစိတ်ကူးများ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြန်သည်။ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခြင်း၊ တံခါးကိုစောင့်ကြည့်ပေးခြင်းမျှဖြင့် မည်သည့်အရာကို ကျွန်တော် ရရှိနိုင်မည်နည်း။ ယခင်က ပလ္လင် နောက်တွင်ရပ်ကာ ကျွန်တော် အလွန်သွေးနားထင်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့ ကျွန်တော့်၏တာဝန်တွင် ကျွန်တော် မျက်နာရစရာမရှိ ရာထူးနေရာလည်းမရှိပေ။ ကျွန်တော့်၏ အဆင့်က အလွန်နိမ့်ကျလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်ကာလတစ်ခုကြပြီးနောက်တွင် ကျွန်တော့်ထဲက အာခံမှုက်ကြီးသထက်ကြီးလာပြီး ပိုပို မှားယွင်းနေသည်ဟု ကျွန်တော် ခံစားရကာ၊ ထိုတာဝန်ကို ဖြည်ဆည်းလိုစိတ်မရှိတော့ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော် မိမိကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲ အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်အား “ကျုပ် လုပ်ဖို့ အခြားတာဝန်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့အားလုံးက အသင်းတော်အတွက် ဧဝံဂေလိတရားဟောပြီး၊ အသင်းတော်ကို ကြည့်ရှုနေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ကို အိမ်မှာ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခိုင်းပြီး တံခါးစောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်- အနာဂတ်မှာ ဒီလိုကနေ ကျုပ်ဘာရနိုင်မှာလဲ။” ဟုပြောခဲ့လေသည်။ ထိုညီမသည် ပြုံးကာ “ရှင်မှားနေပြီ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ တာဝန်ကြီးတာဝန်သေးဆိုတာ မရှိဘူး။ ပိုကြီးတဲ့ အဆင့်အတန်း ပိုငယ်တဲ့ အဆင့်အတန်းဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ ကျွန်မတို့ဘယ်တာဝန်ပဲ လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်မတို့ တစ်ဦးစီဟာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ကိုယ်လုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ အသင်းတော်ဟာ မတူညီလုပ်ငန်း တာဝန်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပေမယ့် ခန္ဓာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် စာတစ်ပိုဒ်ကိုကြည့်ကြရအောင်” ဟုပြောပါသည်။ ထို့နောက်သူမက ကျွန်တော့်ကို ထိုစာပိုဒ်ဖတ်ပြပါသည်။ “လက်ရှိ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲတွင် ဘုရားသခင်ကို စစ်မှန်စွာ ချစ်မြတ်နိုးသော လူတစ်ဦး တစ်ယောက်စီတိုင်း၌ သူ၏ စုံလင်စေခြင်းကို ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ စသည်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်ပဲ သူတို့သည် သူတို့၏ စိတ်နှလုံးကို ဘုရားသခင်ထံ နာခံခြင်းနှင့် အလေးအမြတ်ထားခြင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်နှင့်အမျှ သူ၏ စုံလင်စေခြင်းကို ခံစား ရနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားတို့ကို သူတို့၏ မတူညီသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အပေါ်မူတည်၍ စုံလင်စေသည်။ သင်၏ အစွမ်းရှိသ၍ ဘုရားသခင်၏ လုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် သင့်ကိုယ်သင် ဆက်ကပ်ထား သည်နှင့်အမျှ သင်သည် သူ၏ စုံလင်စေခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် သင်တို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ စုံလင်ခြင်း မရှိကြ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်တို့သည် လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်မျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် လုပ်ငန်းဆောင်တာ နှစ်မျိုးကို ထမ်းရွက်နိုင်သည်။ သင်တို့၏ အစွမ်းရှိသမျှ ဆက်ကပ်သည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်အတွက် သင်တို့ကိုယ်သင်တို့ အသုံးခံသည်နှင့်အမျှ သင်တို့ကို ဘုရားသခင် သည် စုံလင်စေပါလိမ့်မည်။” (နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ ပေါ်လာ၏ထဲက “မိမိတို့၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသူတို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်း အပေါ်တွင်”) ဤဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များနှင့် ညီမ၏မိဿဟရဖွဲ့ခြင်းကို နားထောင်ပြီးနောက်တွင် ကျွန်တော့်၏နှလုံးသားသည် တည်ငြိမကာ အားတက်လာခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော် စဉ်းစားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်လျှင် လူတို့အပေါ်ဘုရားသခင်၏ စုံလင်အောင်ပြုခြင်းသည် သူတို့အဆင့်အတန်းရှိခြင်းမရှိခြင်းအပေါ် သို့မဟုတ် မည်သည့်တာဝန်ကို လုပ်ဆောင်နေသည့်အပေါ်တွင် မူတည်မနေပါ။ ဘုရားသခင်မှ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်သောအရာမှာ လူသားတို့၏စိတ်နှလုံးများ၊ သူတို့၏နာခံမှုနှင့် သူတို့၏သစ္စာရှိမှုဖြစ်ပါသည်။ သူကြည့်ရှုသောအရာမှာ စိတ်သဘောထားတွင် ပြောင်းလဲမှုဖြင့် သူတို့ အဆုံးသတ်ခြင်းရှိမရှိ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ မည်သည့်တာဝန်ကို လုပ်ဆောင်ပါစေ၊ သူတို့ရှိသမျှကို ပေးနိုင်ပြီး လုံးလုံးလျားလျား ဆက်ကပ်အပ်နှံသရွေ့၊ သမ္မာတရား လိုက်လျှောက်ခြင်းကို သူတို့ အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး သူတို့၏ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားကို စွန့်ပစ်နိုင်သရွေ့ သူတို့ကို ဘုရားသခင်မှ ပြည့်စုံအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မတူညီသောလူများသည် မတူညီသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အသင်းတော်တွင် လုပ်ဆောင်သော်ငြားလည်း ပန်းတိုင်မှာ အမြဲတမ်း ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုရစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ဖန်ဆင်းခံတစ်ဦး၏တာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းနေခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်ပိုင် ရည်ရွယ်ချက်များ သို့မဟုတ် မစင်ကြယ်ခြင်းများမရှိပဲ ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကျေနပ်စေရန်အတွက် ဖန်ဆင်းခံများအဖြစ် ကျွန်တော်တို့၏တာဝန်များကို အမှန်တကယ် ဖြည့်ဆည်းကြလျှင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်ကို အခြားသောသူများက အထင်သေးကာ၊ တန်ဖိုးမရှိဟု ထင်လျှင်ပင် ဘုရားသခင်၏အမြင်တွင် ယင်းသည် မြတ်နိုးစရာဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးရှိပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဆန္ဒများကို ကျေနပ်မှုရှိစေရန်သာ ကျွန်တော်တို့၏တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ပါက ကျွန်တော်တို့၏အလုပ် မည်မျှကြီးမြတ်နေစေကာမူ၊ ကျွန်တော်တို့ မည်သည့်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေစေကာမူ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏စိတ်ကို မတွေ့စေနိုင်ပါ။ ထို့နောက်တွင် ဘုရားသခင်ထံမှ ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကို ကျွန်တော် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ “ဖန်ဆင်းခံသတ္တဝါဖြစ်သည့် လူသားသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ခံစားရသည်ဖြစ်စေ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ ခံရသည်ဖြစ်စေ မိမိ၏တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်သင့်သည်၊ မိမိလုပ်သင့်သောအရာတို့ကို လုပ်ဆောင်သင့်ပြီး မိမိလုပ်နိုင်စွမ်းရှိသောအရာတို့ကို လုပ်သင့်သည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေသော လူသားတစ်ဦးအတွက် အလွန်အခြေခံကျသောအရာ ဖြစ်သည်။ သင်သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ခံစားရရန်အတွက်သာ သင်၏တာဝန်ကို မထမ်းဆောင်သင့်၊ ထိုနည်းတူ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာခံရမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်းကြောင့် လုပ်ဆောင်ရန် ငြင်းပယ်ခြင်း သင်မပြုသင့်။” (“နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ထဲက “လူ့ဇာတိခံ ဘုရားသခင်နှင့် လူ၏ တာဝန်တို့ကြား ခြားနားချက်”) ဘုရားသခင်၏ ဤနှုတ်ကပတ်တော်များမှ ဖန်ဆင်းခံတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်တော့်၏တာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းသည် မှန်ကန်ပြီး သင့်လျော်သည်ကို ကျွန်တော် နားလည်ခဲ့ရသည်။ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှု ကျွန်တော် မရှိသင့်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့် အခြေအနေများကို ကျွန်တော် မဆွေးနွေးသင့်ပါ သို့မဟုတ် အပေးအယူ မလုပ်သင့်ပါ။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်အပေါ် ကျွန်တော့်၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကျွန်တော့်၏တာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းတို့က ကောင်းချီးမင်္ဂလာများ သို့မဟုတ် သရဖူတစ်ခုကို ရရန်အတွက်ဖြစ်ပါက ယင်းတို့သည် မသင့်လျော်သော အမြင်တစ်ခုမှလာပြီး ကောင်းမွန်သော အသိစိတ် သို့မဟုတ် ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိပါ။ “သေးငယ်သောအလုပ်” ကိုလုပ်ရန် နှင့် “သေးငယ်သော တာဝန်များ” ကို ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်တော် တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်- ယင်းသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာရလိုစိတ်နှင့် အဆင့်အတန်းကိုရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်ချက်တို့၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကို ကျွန်တော် ခံခဲ့ရသည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ပါလား။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် အကယ်၍ အဆင့်အတန်းနှင့် အာဏာ ကျွန်တော် ရှိလျှင်၊ ကြီးမားသောအလုပ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အခြားသူများကို ဦးဆောင်နိုင်လျှင် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်လေ ဘုရားသခင်၏ချီးကျူးမှုကို ရနိုင်လေ၊ ဘုရားသခင်၏ဆုချီးမြှင့်ခြင်းကို ရနိုင်လေဖြစ်မည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်အတန်းကို ကျွန်တော် မစွန့်လွှတ်နိုင်ပဲ နောက်ဆုံးတွင် ကြီးမြတ်သောသရဖူကို ကျွန်တော် ရနိုင်ဖို့ရန်အလို့ငှာ ကြီးမားသောအလုပ်ကိုသာ လုပ်ရန်နှင့် ကြီးမားသော တာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ရန် အမြဲတမ်းရှာဖွေခဲ့သည်။ ယင်းမှာ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့သောမှားယွင်းသည့် အမြင်ကို ကျွန်တော် သိုထားပြီး၊ ကျွန်တော့်အတွက် အသင်းတော်မှ စီစဉ်ထားသောတာဝန်ကို မကျေနပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုပင် နားလည်မှုလွဲခဲ့သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် အတိအကျ ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျွန်တော် ဆင်ခြေတက်ခဲ့ပြီး၊ အိမ်ရှင်တစ်ဦး၏တာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းသည် ကျွန်တော့်၏ ကြီးမားသည် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးဝင်မှု အနည်းငယ်သာပေးနိုင်ပြီး၊ ယင်းသည် ကျွန်တော့််ကိုအထင်သေးသည့် နည်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် အလွန်မာထောင်လွှားခဲ့ပြီး အသိတရားကင်းမဲ့ခဲ့သည်။ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ တရားစီရင်မှုအောက်တွင် နောက်တဖန် ကျွန်တော် အရှက်ရမိခဲ့ပြန်သည်။ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပေးမှုကြောင့်လည်း ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ကျွန်တော် နားလည်ခဲ့ပါသည်။ မည်သို့သောသူမျိုးကို ဘုရားသခင်နှစ်သက်သည်၊ မည်သို့သောသူမျိုးကို ဘုရားသခင် စုံလင်စေသည်နှင့် မည်သို့သောသူမျိုးကို ဘုရားသခင် စက်ဆုပ်သည်ကို ကျွန်တော် သိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်အတွက် နာခံမှုနှလုံးသားတစ်ခုကို ကျွန်တော် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် ကျွန်တော့်၏ လိုအင်ဆန္ဒကို ထားကာ၊ အသင်းတော်တွင် အသေးငယ်ဆုံး၊ အနှိမ့်ချဆုံးလူတစ်ဦးဖြစ်ရန်၊ ကျွန်တော့်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို ကျွန်တော့်၏အိမ်တွင် အနှောင့်အယှက်မရှိပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံခွင့်ပြုကာ ကျွန်တော့်၏တာဝန်ဖြစ်သော အိမ်ရှင်တစ်ဦး၏တာဝန်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်များကို စောင့်ရှောက်ရန် ဆန္ဒရှိခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှလုံးသားကို နှစ်သိမ့်ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်တော် အသုံးပြုပါမည်။
ဤအတွေ့အကြုံမှတဆင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များ မည်မျှကြီးမြတ်သည်၊ ဘုရားသခင်က လူသားမျိုးနွယ်ကို ကယ်တင်ရန် သမ္မာတရား နှင့် သူ၏အလိုတော်အားလုံးကို ဖော်ပြခဲ့သည်ကို ကျွန်တော် သတိပြုမိခဲ့ပါသည်။ အရာအားလုံးတွင် သမ္မာတရားကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ရန်၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို နားလည်ရန်၊ ကျွန်တော်တို့၏ကိုယ်ပိုင် အယူအဆများနှင့် ယုံကြည်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို လုံ့လရှိစွာ ဖတ်ရှုရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစကာ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက် ပိုမိုဆာငတ်မှု ဖြစ်ပေါခဲ့ပြီး မနက်တိုင်း လေးနာရီ သို့မဟုတ် ငါးနာရီ စတင်နှိုးထကာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဖတ်ရှုခဲ့ပါသည်။ အချိန်တစ်ချို့်ကြာပြီးနောက်တွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် အပိုင်းအချို့ကို ကျွန်တော် စတင်မှတ်မိလာနိုင်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အပေါ် အနည်းငယ်နားလည်မှုရှိလာကာ ကျွန်တော့်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် အမှန်တကယ် မွေ့လျော်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော့်၏အိမ်တွင် မကြာခဏဆိုသလို နေထိုင်သော ဧဝံဂေလိလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသော ညီအစ်ကိုတစ်ဦး ရှိလေသည်။ သူဧဝံဂေလိတရားဟောပြီး အခက်အခဲများတွေ့ကြုံသည့် အချို့အချိန်များတွင် သူသည် ထိုပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကျွန်တော့်အား ရှာဖွေစေပါသည်။ ကျွန်တော် လျင်မြန်စွာရှာတွေ့နိုင်သည်ကို သူတွေ့မြင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြဿနာရှိလျှင်ရှိခြင်း သူက ကျွန်တော့်ကို ဘုရားသခင်ထံမှ နှုတ်ကပတ်တော်အချို့ ကူညီရှာဖွေခိုင်းခဲ့သည်။ သူက ကျွန်တော့်ကို အလွန်အထင်ကြီးပါသည်။ မထင်မှတ်ပဲ ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားသော သဘာဝက နောက်တဖန် စတင်သရုပ်ပြလာလေသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တွေးမိခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိကို ဟောကြားရန်အတွက် သင်သည် တာဝန်ရှိသော်လည်း သင့်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ကျွန်တော် ကူညီနေရဆဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကျွန်တော် ဖတ်ရှုခဲ့သလောက် သင်မဖတ်ရှုခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် နားလည်သကဲ့သို့ သင်နားမလည်ပါ။သမ္မာတရားကို ကျွန်တော် ရရှိနှင့်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားခြင်းအတွက် ကျွန်တော် ကြီးကြပ်ရပါက၊ သင့်ထက် ပို၍ကောင်းမည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်၏စိတ်ထဲတွင် ကျွန်တော့်၏ညီအကိုအပေါ်တွင် စတင်အထင်သေးခဲ့ပြီး အချိန်တစ်ခဏမျှကြာပြီးနောက် သူ့အပေါ်တွင် ခပ်တန်းတန်း ကျွန်တော် စတင်ဆက်ဆံခဲ့ပါသည်။ တနေ့တွင် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်သည် ကျွန်တော့် အိမ်သို့ရောက်လာပြီး “အခုတလော ဘယ်လိုနေလဲ” ဟု ကျွန်တော့်ကို မေးပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ကျွန်တော်က “ကျွန်တော် အဆင်ပြေတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တောတွေ ကို ကျွန်တော် နေ့တိုင်းဖတ်ရှုပြီး နေ့တိုင်း ဆုတောင်းတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို ကျွန်တော်အတော်နားလည်တာကို ဒီညီလေးကသိလို့ ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ ဘုရားသခင်ဆီက နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို ရှာဖွေရာမှာ ကျွန်တော့်ကို ကူညီပေးဖို့အမြဲပြောတယ်လေ…”ဟု ပြန်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော် ခေါင်းဆောင်သည် ကျွန်တော် ပြောသည့်အရာထဲတွင် မာနထောင်လွှားမှုကို ကြားရသည့်အခါ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များပါသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကောက်ကိုင်ကာ “ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် စာပိုဒ်အနည်းငယ်ကိုဖတ်ကြရအောင်” ဟုပြောပါသည်။ ဘုရားသခင်က ဤသို့ပြောပါသည်။ ‘၎င်းတို့၏ ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်ကြီးလေလေ၊ ၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက် ပို၍ ကြီးလေလေဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အယူဝါဒများကို ၎င်းတို့ ပို၍နားလည်လေလေ၊ ၎င်းတို့၏ စိတ်သဘောထားများမှာ ပို၍မောက်မာလေလေ ဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း၌ သမ္မာတရားကို ရှာဖွေရမည့်အစား ရာထူးဂုဏ်ဒြပ်ကို ရှာဖွေပါက သင်၌ အန္တရာယ်ရှိနေသည်။’ (ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို အလွန်မြောက်မြားစွာ တောင်းဆိုကြသည်”) ‘သမ္မာတရား၏ လက်တွေ့ကျခြင်း၏ မည်သည့်ရှုထောင့်ကို သင်ကြားဖူးသည် ဖြစ်ပါစေ၊ အကယ်၍ သင်သည် သင့်ကိုယ်သင် ၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ သင်၏အသက်တာတွင် ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကို ကျင့်သုံးပြီး သင်၏လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုထဲ၌ ထည့်သွင်းပါက တစ်စုံတစ်ခုကို သေချာပေါက်ရပြီး သေချာပေါက် ပြောင်းလဲမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကို သင်၏ ဝမ်းဗိုက်အတွင်း သွတ်သွင်းပြီး သင်၏ဦးနှောက်ထဲ၌ ၎င်းတို့ကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပါက သင်သည် မည်သည့်အခါမျှ ပြောင်းလဲမည် မဟုတ်ပေ။...သင်သည် ကောင်းသောအုတ်မြစ်တစ်ခုကို ချရမည်။ အကယ်၍ အစကတည်းက စာလုံးများနှင့် သြဝါဒများ၏ အုတ်မြစ်ကို ချပါက သင် ဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းမှာ လူတို့သည် ကမ်းခြေတစ်ခုပေါ်တွင် အိမ်တစ်လုံး တည်ဆောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်၊ ထိုအိမ်ကို သင်မည်မျှပင် မြင့်မားစွာ တည်ဆောက်ပါစေ ၎င်းသည် ပြိုကျမည့် အန္တရာယ် ရှိပြီး ရေရှည်ခံမည် မဟုတ်ပေ။’ (ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “ရိုးသားသောလူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏ အခြေခံအကျဆုံး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်”)” ဤဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို ကြားရသည့်နောက်တွင် ကျွန်တော် လုံးဝရှက်မိသွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ ကိုယ်ပိုင် မာနထောင်လွှားသော ဆိုးယုတ်သည့် သဘာဝသည် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်ကို သတိပြုမိလိုက်ပါသည်။ ယခင်က သခင်ယေရှုအပေါ် ကျွန်တော့်၏ယုံကြည်မှုတွင် ကျွန်တော်သည် သမ္မာကျမ်းစာတွင်းမှ သီအိုရီများကို နားလည်ခြင်းနှင့် နက်ရှိုင်းသော အသိပညာများ ရရှိခြင်းအပေါ်တွင် အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော် ပို၍ မောက်မာလာစေရန်အတွက် ကြီးမားပြီး မြင့်မြတ်လာစေရန်အတွက် ယင်းတို့ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များထဲက သမ္မာတရားအများစွာကို ကျွန်တော် ဖတ်နိုင်သည်မှာ ကံကောင်းလှသော်လည်း လမ်းဟောင်းသို့ ကျွန်တော် ပြန်လှည့်မိခဲ့ကာ ကျွန်တော့်၏ကိုယ်ပိုင် အသိဉာဏ်အပေါ်တွင် မှီခိုခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပတ်များထံမှ စာကြောင်းအချို့ကို ကျွန်တော် အလွတ်ကျက်မှတ်ခဲ့ပြီး သမ္မာတရားကို ရရှိခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ကျွန်တော် မာနထောင်လွှားလာခဲ့ပြီး မည်သူ့ကိုမျှ နားမထောင်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်သည် အခြားသူများနှင့် အဆင့်အတန်းအတွက် တုပြိုင်ခဲ့ပြီး သူတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် လွန်စွာပင် ရှက်ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို တိုက်ရိုက် အယူအဆများဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ခြင်းက သာ၍မောက်မာလာစေရုံသာ ရှိပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များမှ သမ္မာတရားအပေါ် နားလည်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် လူတို့၏ စိတ်သဘောထားများကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး လူသားတစ်ဦးအဖြစ် သူတို့ကို အသက်ရှင်နိုင်စေလိမ့်မည်ဆိုသည်ကို ကျွန်တော် တွေ့မြင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုညီအစ်ကိုသည် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော့်ထက်ပို၍ ယုံကြည်ခဲ့ကာ ကျွန်တော်နားလည်သည်ထက် ပိုနားလည်ခဲ့သော်လည်း သူသည် ကျွန်တော့်၏အကူအညီကို နှိမ့်ချစွာ တောင်းခံနိုင်ခဲ့လေသည်။ ယင်းသည် သူ၏အားသာချက်တစ်ခု အမှန်ပင်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်၊ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သမ္မာတရားအပေါ် သူ၏နားလည်ခြင်း အတွေ့အကြုံမှတဆင့် မွေးဖွားလာသော အသီးအပွင့်ဖြစ်လေသည်။ သူ့ထံမှ ကျွန်တော်သင်ယူပြီး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အသက်တာတွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်သော လူသားသဘာဝကို အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန် အာရုံမစိုက်ခဲ့သည်သာမက သူ့ကို ကျွန်တော် အထင်သေးခဲ့ကာ အရေးမစိုက်ခဲ့ပေ။ ကျွန်တော်သည် အမှန်တကယ်ပင် မောက်မာသည်၊ မျက်စိကန်းပြီး၊ မသိနားမလည်သောသူ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော့် နှလုံးသားက အလွန်ပင် နာကျင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားသော သဘာဝက အလွန်ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ဆိုးလှသည်ကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ယင်းသည် အလွန်ပင်ရွံ့ရှာဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့သည်အထိ ရောက်နေသည့် ဤသို့သော မာနထောင်လွှားမျိုးသည် ဘုရားသခင်၏စိတ်သဘောထားကို အလွန်လွယ်လွယ်ကူကူ ပုန်ကန်ပြစ်မှား နိုင်ပေသည်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲသမ္မာတရားကို စစ်မှန်စွာရှာဖွေခြင်းပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲနှင့် မိမိကိုယ်ကိုသာ ဖျက်ဆီးမိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာအားလုံးကို ကျွန်တော် သတိပြုမိသောအခါ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ တရားစီရင်ခြင်နှင့် ဆုံးမပြစ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် သူ၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော် အမှန်ပင် ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ဤအရာက မိမိ၏ကိုယ်ပိုင် မာနထောင်လွှားသောသဘာဝကို မုန်းတီမှုအချို့ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်အပေါ် ကျွန်တော့်၏ယုံကြည်မှုတွင် သမ္မာတရားကို ကျွန်တော် ရှာဖွေကာ စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုကို ရှာဖွေသင့်ကြောင်း ကျွန်တော် နားလည်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအရာပြီးသွားသည့်နောက်တွင် ကျွန်တော်၏ မာနထောင်လွှားမှု၏ အရင်းအမြစ်နှင့် ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့မှု၊ မည်သည့်အရာက ကျွန်တော့်အတွေးများကို ဦးဆောင်နေသည်နှင့် မည်သည့်အရာက ကျွန်တော့်၏ ဆိုးယုတ်သော မာနထောင်လွှားသည့် သဘာဝကို မကြာခဏ ထွက်ပေါ်လာစေသည်တို့ကို စတင် ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ တနေ့တွင် ဘုရားသခင်ထံမှ ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကို ကျွန်တော် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ “စာတန်ပြုသမျှအရာတိုင်းမှာ ၎င်းအတွက်သာပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်ထက် သာလွန်လိုသည်၊ ဘုရားသခင်ထံမှ လွတ်မြောက်လိုပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင် တန်ခိုးကိုကိုင်စွဲလို၍ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးသော အရာများအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်လိုသည်။ လူသားသည် စာတန်၏ ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် မာနကြီးခြင်း၊ ဘဝင်မြင့်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ ယုတ်ညံ့ခြင်းသဘော ရှိသွားကြပြီး ၎င်းတို့၏ အကျိုးအမြတ်များကိုသာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူသား၏ သဘာဝဗီဇသည် စာတန်၏ သဘာဝဗီဇဖြစ်သည်။...လူသား၏ သဘာဝဗီဇတွင် စာတန်နှင့်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ် အမြောက်အမြား ပါဝင်သည်။ သင်သည် တစ်ခါတစ်ရံ သင်ကိုယ်တိုင် ယင်းကို သတိပင်မထားမိဘဲ နားမလည်သည့်တိုင် သင့်ဘဝ၏ တဒင်္ဂတိုင်းသည် ယင်းအပေါ် အခြေခံလေသည်။ ထို့အပြင် ဤအတွေးအခေါ်မှာ အလွန်မှန်ကန်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟု သင်ထင်သည်။ စာတန်၏ အတွေးအခေါ်သည် လူသားတို့၏ အမှန်တရားဖြစ်သွားပြီး သူတို့သည် ယင်းကို စိုးစဥ်းမျှပင် အတိုက်အခံ မလုပ်ကြဘဲ စာတန်၏ အတွေးအခေါ်နှင့်လုံးဝအညီ အသက်ရှင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သူတို့၏ စာတန်နှင့်ဆိုင်သော သဘာဝဗီဇကို အဆက်မပြတ်ထုတ်ဖော်နေကြပြီး သူတို့သည် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် စာတန်နှင့်ဆိုင်သော အတွေးအခေါ်အားဖြင့် အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏။ စာတန်၏ သဘာဝဗီဇသည် လူသား၏ အသက်တာဖြစ်သည်။” (ခရစ်တော်၏ပြောဆိုချက် မှတ်တမ်းများ စာအုပ်ထဲရှိ “ပေတရု၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်လှမ်းနည်း”) ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကို တွေးဆမိသောအခါ ကျွန်တော့် နှလုံးသားသည် ပိုပိုပြီး အားတက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် စဉ်းစားခဲ့ပါသည်။ လူသားမျိုးနွယ်သည် စာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရပြီးသည့်နောက် ကျွန်တော်တို့၏ သဘာဝသည်လည်း မောက်မာသော၊ အထိန်းအကွပ်မရှိသော ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းမရှိသော စာတန်ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာပြီး အခြားသူများမှ ကျွန်တော်တို့ကို အထင်ကြီးခြင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ခြင်းကိုသာ ရှာဖွေလိုက်စားကြသည်။ လူမှုရေးလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ကျော်ကြားသောလူတို့ထံမှ စကားတို့အားဖြင့် စာတန်သည် သူ၏အတွေးများ၊ ဘဝ၏အတွေးအခေါ်များနှင့် သူ၏အသက်ရှင်ရေး နိယာမများကို လူသား၏ နှလုံးသားထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးပြီး သူတို့၏ဘဝတွင် လူတို့မှီခိုရသည့် တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာစေလေသည်။ ဤအရာတို့က လူသားမျိုးနွယ်တို့၏အတွေးများကို ဦးဆောင်ကာ သူတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြီးစိုးပြီး သူတို့အား ပိုပိုပြီး မာနထောင်လွှားစေကာ ဆင်ခြေတုံတရားကင်းမဲ့စေပါသည်။ ငယ်စဉ်မှစကာ ကျွန်တော် အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရခြင်း၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံခဲ့ရခြင်းနှင့် အာဏာနှင့် အဆင့်အတန်းရှိသူတို့ကို စတင် အားကျခဲ့သည့်အချက်တို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မိပါသည်။ ထို့အပြင် “လူတစ်ဦးသည် အခြားသူများအထက် သာလွန်ကာ သူ၏မျိုးဆက်များကို ဂုဏ်ကိုဆောင်ယူပေးရမည်။” “ရုန်းကန်သောသူတို့သည် အမြင့်သို့တက်သည် သို့သော် ရေသည် အောက်ဖက်သို့သာစီးဆင်းသည်။” နှင့် “ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးတစ်ခွင်တွင် ငါသည်ငါ၏ကိုယ်ပိုင်ဘုရားဖြစ်သည်” စသည့် စာတန်၏အသက်ရှင်သန် ရေးဥပဒေသများသည် ယခင်ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွန်တော့်၏နှလုံးသားတွင် ခိုင်မာစွာ စိုက်ပျိုးထားပြီးဖြစ်ကာ ကျွန်တော့်၏ဘဝကို စိုးမိုးနေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အပြင်လောကတွင်ဖြစ်စေ အသင်းတော်တွင်ဖြစ်စေ အဆင့်အတန်းနှင့် နာမည်ကောင်း ရှာဖွေလိုက်စားရန် ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် အခြားသူများထက် ပိုမြင့်သောရာထူး နှင့် အခြားသူများကို စီမံကွပ်ကဲဖို့ရန် ကြိုးစားနေခဲ့ပါသည်။ စာတန်ထံမှ ဤအဆိပ်များဖြင့် ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရသဖြင့် ကျွန်တော် မိမိကိုယ်ကိုယ် အလွန်မြင့်မားစွာ မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်၏ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အရှေ့တွင် ကျွန်တော်က အချိန်ကြာမြင့်စွာ ယုံကြည်သူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ခြင်းတည်းဟူသော ကျွန်တော့်၏ အရည်အချင်းများကို အမြဲဖော်ပြကာ ကျွန်တော့်၏ အားသာချက်များကို အခြားသူများ၏ အားနည်းချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပါသည်။ အရာအားလုံးသည် ကျွန်တော် သတိပြုမိသည့် အောက်တွင်ရှိပြီး ကျွန်တော်သည် အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချခွင့်ရခဲ့ကာ၊ ကျွန်တော် အလွန် မာနထောင်လွှားခဲ့သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘုရားသခင်မှစေလွှတ်ခံခဲ့ရသည်ဟုပင် ထင်မြင်ကာ၊ ဘုရားသခင်နှင့်အတူတကွ ဘုရင်တပါးအဖြစ် အုပ်စိုးချင်ခဲ့ပါသည်။ စာတန်၏ဤအဆိပ်များသည် ကျွန်တော့်ကို အလွန် မာနထောင်လွှားအောင် ပြုခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော် သည် လူသားတစ်ဦး၏ ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ စာတန်ကဲ့သို့ပင် အရာရာတိုင်းတွင် အာဏာကို ကျွန်တော် ဆုပ်ကိုင်ထားလိုပြီး လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် အုပ်စိုးရန် မြင့်မားသည့် ရာထူးတစ်ခုကို လိုချင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် အသက်ရှင်နေထိုင်ပြသခဲ့သည်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးစာတန်၏ ပုံရိပ် လုံးဝ ဖြစ်ပါသည်။ စာတန်၏ ဤအဆိပ်များသည် ကျွန်တော့်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နက်ရှိုင်းစွာ ထိခိုက်စေခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံ ကျွန်တော် ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ “အိုး.. ဘုရားသခင် ကျွန်တော် ဒီအရာတွေအပေါ် အခြေခံပြီး အသက်ရှင်လိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒါတွေအတွက် ကျွန်တော် ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ကျွန်တော် သည်းမခံနိုင်လောက်တဲ့ အကျဉ်းတန်မှုမှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တော့်ကို စက်ဆုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ အိုး. ဘုရားသခင် သမ္မာတရားကို ကျွန်တော် ရှာဖွေလိုက်စားဖို့၊ အသိစိတ်နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိပြီး မှန်ကန်တဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်လာစေဖို့၊ စစ်မှန်တဲ့ လူသားတစ်ဦးရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အသက်ရှင်ဖို့၊ ကိုယ်တော့်ရဲ့ နှလုံးသားကို နှစ်သိမ့်စေဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ အိုး… ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်ရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့ ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကို ကျွန်တော်ဆီကနေ ဝေးရာကို မယူဆောင်သွားဖို့ တောင်းလျှောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်သဘောထားကို ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်နိုင်သရွေ့ စစ်မှန်တဲ့လူသားပုံသဏ္ဍာန်ကို အသက်ရှင်နိုင်သေးသရွေ့၊ ကိုယ်တော်က ရယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်သေးသရွေ့ ကိုယ်တော့်ဆီကနေ ပိုပြင်းထန်တဲ့ တရားစီရင်မှု၊ ပြစ်တင်ဆုံးမမှု၊ ရိုက်နှက်မှုနဲ့ ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုတွေ လက်ခံဖို့ ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိပါတယ်။”
တစ်နေ့တွင် ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်မှပြောသော စကားတို့ကို ကျွန်တော် ဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ “ဘုရားသခင်၌ မိမိကိုယ်ကိုမှန်သည်ဟုထင်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို အရေးပါသည်ဟု ထင်ခြင်းတို့၏ အရိပ်လက္ခဏာမရှိပါ၊ သို့မဟုတ် မာန်မာနကြီးမှုနှင့် စိတ်ကြီးဝင်မှုတို့၏ အရိပ်လက္ခဏာ မရှိပါ၊ ဘုရားသခင်၌ မရိုးဖြောင့်သော စိတ်သဘော လုံးဝမရှိပါ။ ဘုရားသခင်ကို မနာခံသည့်အရာ အားလုံးမှာ စာတန်ထံမှ လာသည်၊ စာတန်သည် ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်မှုနှင့် ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှု အားလုံးတို့၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လူသားတို့၌ စာတန်ကဲ့သို့သော စရိုက်များရှိနေရခြင်းမှာ လူသားသည် စာတန်၏ ယိုယွင်းဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် စာတန်၏ ယိုယွင်းဖျက်ဆီးခြင်း မခံခဲ့ရပါ၊ ထိုအကြောင်းကြောင့် သူ၌ ဘုရားသခင်၏ ပင်ကိုလက္ခဏာများသာလျှင်ရှိပြီး စာတန်၏ပင်ကိုလက္ခဏာ တစ်ခုမျှ မရှိပါ။” (နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ထဲက "ခရစ်တော်၏ဂုဏ်ဒြပ်မှာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်") ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည် နောက်တစ်ဖန် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ တို့ထိမှုကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မြင့်မားပြီး ကြီးမြတ်လေသည်။ သို့ရာတွင် သူသည် နှိမ့်ချပြီး ပုန်းကွယ်နေလေသည်။ လူသားတို့အကြားသူ၏ အမှုတော်တွင် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ပုံဖမ်းဖို့ မပြောနှင့်၊ သူကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ခါမျှ မဖော်ပြခဲ့သလို သူမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည် သို့မဟုတ် သူ၏ရာထူးကို အများမြင်အောင် ပြသခြင်းလည်း မရှိပေ။ ထိုသို့ပြုမည့်အစား လူတို့ကြားတွင် ကိုယ်တော်သည် လူမသိ၊ သူမသိနေထိုင်ပြီး လူသားကို ထောက်ပံ့ကာ လမ်းညွှန်ရန် သမ္မာတရားကို ဖော်ပြပြီး လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန် သူ၏အမှုတော်ကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်အလွန်ကြီးမြတ်သည်၊ အလွန်သန့်စင်ပြီး သူ၏အသက်တာတွင် မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်သည် အရေးကြီးသည်ဟု ဖော်ပြသောလက္ခဏာများမရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သည် သမ္မာတရား၊ လမ်းခရီးနှင့် အသက်တာဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ သူသည် ကြီးမြတ်သည့်အပြင် နှိမ့်ချပြီး ချစ်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။ ခရစ်တော်ရှိသည့်အရာနှင့် ဖြစ်သည့်အရာကို တွေ့မြင်ရသောအခါ ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားမှုက မည်မျှ ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး မည်မျှ မသိနားမလည်သည်ကို ပိုခံစားခဲ့ရပါသည်။ ခရစ်တော်၏ပုဥပမာကို လိုက်လျှောက်ရန် ကျွန်တော် တောင့်တပြီး ဘုရားသခင်ကို စိတ်ကျေနပ်စေရန် စစ်မှန်သောသူတစ်ဦး၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ကျွန်တော် လိုလားပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ခရစ်တော်၏ဥပမာကို လိုက်လျှောက်ခြင်းနှင့် စစ်မှန်သောသူတစ်ဦး၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို နေထိုင်အသက်ရှင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ် ရှာဖွေလိုက်စားသော ပန်းတိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
တစ်ကြိမ်တွင်၊ ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ စာတစ်ပိုဒ်ကို ကျွန်တော် ဖတ်ရှုမိပြီး၊ နားမလည်နိုင်ခဲ့ပေ။ မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ကို ဆိုလိုသည်ကို ကျွန်တော် မသိပါ။ သို့ရာတွင် မျက်နှာမပျက်စေရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုဘေးဖယ်ကာ ညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့် မိဿဟာရဖွဲ့မေးမြန်းခြင်းကို ကျွန်တော် မပြုလိုခဲ့ပေ။ အခြားသူများ၏ပြဿနာများကို ကျွန်တော် အမြဲတမ်းဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီး အခြားသူများထံမှ အကူအညီတောင်းခံရန်အတွက် ကျွန်တော့်၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများကို တင်ပြခြင်းမပြုခဲ့ဖူးသဖြင့် အခြားသူများက ကျွန်တော့်ကို အထင်သေးမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တွင် မိဿဟာရဖွဲ့ရာတွင် ဖွင့်ချပြောဆိုလိုခြင်းမရှိသည့် ကျွန်တော့်၏စိတ်နှင့် အခြားသူများ ကျွန်တော့်ကို အထင်သေးမည်ကို မလိုလားသည့် ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားသောသဘာဝသည် စိုးမိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ ညီအကိုမောင်နှမများနှင့် မိဿဟာရဖွဲ့ရန် ဇာတိပကတိကို ကျွန်တော် ပုန်ကန်တွန်းလှန်ခဲ့ရပါသည်။ သူတို့သည် ကျွန်တော့်ကို အထင်မသေးရုံသာမက ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ကျွန်တော့်ကို စိတ်ရှည်စွာ ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်၏အခက်အခဲက အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြေလည်သွားခဲ့မည်ဟု ကျွန်တော်တခါမ တွေးမထင်ထားခဲ့ပါ။ တစ်ကြိမ်တွင် ညီအစ်ကိုတစ်ဦးက အသင်းတော်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော စာတစ်စောင်ကို ကျွန်တော့်အား သွားပို့စေခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ မာနထောင်လွှားမှုကြောင့် မိမိကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ပေါ်အခြေခံပြီး အလုပ်ကို ကျွန်တော် ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့် စာသည် အချိန်မှီပို့ခြင်းမခံခဲ့ရပေ။ ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အလုပ်ကို ကြန့်ကြာသွားစေမည်ကို သူသိသောအခါ သူသည် အလွန်စိုးရိမ်သွားလေသည်။ သူ ကျွန်တော့်ကို ဖြေရှင်းပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော် အလွန်မသက်မသာဖြစ်ပြီး အရှက်ရမှုကို ခံစားခဲ့ရပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသည် ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ကျွန်တော့်၏ ရှုထောင့်အမြင်များကို ပြုပြင် ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် နာခံမှုရှိမရှိဆိုသည်ကို ဘုရားသခင်မှစစ်ဆေးခြင်းနှင့် သမ္မာတရားကို ကျွန်တော် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိတို့ကို စစ်ဆေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံ ကျွန်တော် ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ “အိုး ဘုရားသခင် ဒီနေ့ ကျွန်တော့် ညီအစ်ကိုရဲ့ ဆုံးမတာကို ကျွန်တော် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် မသက်မသာခံစားခဲ့ရတယ်။ အမြဲတမ်းမြင့်မားတဲ့ ရာထူးနေရာမှာ ကျွန်တော်ရှိနေပြီး တခြားလူတွေကို ဆူပူတာ အမြဲလုပ်ခဲ့သလို သမ္မာတရားကို ဘယ်တော့မှ ကျိုးနွံနာခံခြင်းမရှိခဲ့လို့ ပြန်လည်တွန်းလှန်လိုစိတ်လည်း ကျွန်တော် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ စာတန်ရဲ့ပုံရိပ်အတိုင်း ကျွန်တော် အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ခဲ့မိတယ်။ အခု ကိုယ်တော့်ရဲ့အမှုတော်ကို ပိုတွေ့ကြုံခံစားရပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရခြင်းနဲ့ ပြုပြင်ခံရခြင်းတွေကို လက်ခံနိုင်တဲ့သူက ယုတ္တိအတန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် နားလည်လာတယ်။ ဒီလိုလူက ဘုရားသခင်ကို နာခံတဲ့သူ၊ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့တဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးကပဲ တည်ကြည်မှုရှိပြီး လူသားပုံသဏ္ဍာန် ရှိပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ကျွန်တော် ဘုရားသခင်ကို ချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ ဇာတိပကတိကို ဖယ်ရှားလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ သံဓိဌာန်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ပြောင်းဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။” ထိုသို့ဆုတောင်းပြီးနောက်တွင် နှလုံးသားထဲတွင် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ပျော်မွေ့မှုကို ကျွန်တော် ပိုခံစားခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့်၏ကိုယ်ပိုင် ဂုဏ်နှင့် အဆင့်အတန်းကို ဘေးဖယ်ထားနိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ညီအစ်ကို ၏ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းကိုပျော်ရွှင်စွာ လက်ခံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားပြီးသည့်နောက်တွင် ကျွန်တော့်၏ညီအစ်ကိုသည် ဤအရာအားလုံးကို ကျွန်တော် လက်မခံနိုင်မည်ကို စိုးရိမ်လာကာ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်များကို ကျွန်တော်နှင့် ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်သော နားလည်မှုများကို ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ရယ်မောပြောဆိုကြပြီး ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်၊ ကျွန်တော့်ကို သူ ပြောင်းလဲစေခြင်းအတွက် နှလုံးသားထဲမှ ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
ထိုသို့ဖြင့် အနန္တတန်ခိုးရှင်၏တရားစီရင်မှုနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမမှု တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်မှတဆင့် ကျွန်တော့်၏ မာနထောင်လွှားသော စိတ်သဘောထားသည် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ မပေါ်မလွင်သည့် လူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်တော်နေနိုင်လာပြီး၊ အခြားသူများကိုနားထောင်ရန်အတွက် မာနထောင်လွှားလွန်းခြင်း နှင့် ဆန္ဒမရှိခြင်းတို့ ကျွန်တော် မရှိတော့ပေ။ မည်သည့်အရာဖြစ်ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရန် မလိုတော့ပေ။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အကြံဉာဏ်များ တောင်းခံလာနိုင်ပြီး သူတို့နှင့် သဟဇာတဖြစ်စွာပူးပေါင်းလာနိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် လူသားပုံသဏ္ဍာန် ကျွန်တော် အနည်းငယ်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်ကတည်းမှစ၍ ကျွန်တော် ပို ရိုးရှင်းလာသောလူသားတစ်ဦးဖြစ်လာသည်ဟု ခံစားမိပါသည်။ အလွန်အေးဆေးစွာ အလွန်ပျော်ရွှင်စွာ ကျွန်တော် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တော့်အပေါ် ကယ်တင်ခြင်းအား ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ သူ၏ကယ်တင်ခြင်းမရှိဘဲ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းမှ ကျွန်တော် လွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ မှောင်မိုကအလယ်တွင် ခါးသီးစွာ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းမရှိပါက ကျွန်တော့်၏သဘာဝသည် ပိုပို၍သာမာနထောင်လွှားလာပြီး ကျွန်တော့်ကို ဘုရားကဲ့သို့ ကိုးကွယ်စေပြီး၊ ဘုရားသခင်၏စိတ်သဘောထားကို ထိခိုက်မိကာ သူ၏အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံစားရမည့် အတိုင်းအတာအထိရောက်မည်ဖြစ်သော်လည်း သတိမပြုမိဆဲပင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်မှုနှင့် ဆုံးမပြစ်တင်မှု တစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်မှတဆင့်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအလွန်စစ်မှန်ကြောင်းနှင့် သူသည် ကျွန်တော့်ကို တို့ထိရန် သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အမြဲအသုံးပြုနေကာ ကျွန်တော် မိမိဘာသာ ပြောင်းလဲသည်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း သတိပြုမိပါသည်။ ကျွန်တော် မည်သို့ပင် ပုန်ကန်စေကာမူ၊ ကျွန်တော့်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ မည်မျှ ခက်ခဲပါစေ၊ ဘုရားသခင်အပေါ်တွင် မကျေမနပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းများမည်မျှရှိစေကာမူ ဘုရားသခင်သည် ယင်းကို ပုံကြီးချဲ့မနေခဲ့ပါ။ သူသည် ကျွန်တော့်၏နှလုံးသားကိုနှိုးထရန်၊ ကျွန်တော့်၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို နိုးထစေရန်၊ စာတန်၏ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုမှ ကျွန်တော့်ကို ကယ်တင်ရန်၊ လူသားအသက်တာ၏မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းတွင် လျှောက်လှမ်းကာ ဘုရားသခင်၏အလင်းထဲတွင် နေထိုင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးရန် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးကို အပင်ပန်းခံကာ ချမှတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကာ ကျွန်တော့်အတွက် တိုင်းတာမရနိုင်သောအဖိုးအခကို ပေးအပ်ခဲ့လေသည်။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အမှန်ပင် ကြီးမားကာ ကျယ်ပြန့်လှပေသည်။ ယခု၊ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်မှုနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းသည် ကျွန်တော့်၏ရတနာဖြစ်လာလေပြီ။ ယင်းတို့သည် ကျွန်တော့်၏အတွေ့အကြုံမှ ကြွယ်ဝမှု၏ အဖိုးထိုက်တန်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်မည်သို့မျှ မေ့ပျောက်မသွားမည့်အရာ တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဒုက္ခခံစားရမှုသည် တန်ဖိုးနှင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်မှီရန် အလွန်ဝေးကွာနေဆဲဖြစ်သော်လည်း စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုကို ကျွန်တော် စိတ်ချယုံကြည်မှုဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေကာ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်မှုများနှင့် ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းများကို ပိုနက်ရှိုင်းစွာ တွေ့ကြုံရရန် ကျွန်တော် ဆန္ဒရှိပါသည်။ ကျွန်တော့်ကို ဘုရားသခင်က သူနှင့် သဟဇတဖြစ်သည့် စစ်မှန်သည့် လူတစ်ဦးအဖြစ်သို့ မလွဲမသွေပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်ကို ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်။
ယခင်က：ကျရှုံးနေသည့် ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း
နောက်တစ်ခုသို့：ဘဝ၏လမ်းမှန်ကို ယခုမှ ကျွန်မ စလျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်